Ekpochapu osisi: ndepụta nke osisi furu efu | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mgbe anyị na-ekwu maka mmetụta dị iche iche gburugburu ebe obibi mmadụ na -emepụta na mbara ụwa anyị ma anyị na-ekwu maka ọnwụ nke ụdị dị iche iche nke anụmanụ, anyị na-echekarị banyere anụmanụ. Agbanyeghị, enwerekwa ikpochapu osisi ma nke mmadu ma nke mmadu. Ekpochapu osisi bụ nke fụpụrụ n’elu ụwa n’ihi ọtụtụ ebumnuche.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ ihe kpatara ụdị ndụ dị iche iche na ụdị ahịhịa na-apụ n’anya ga-apụ n’anya.
1 Ihe kpatara mbelata ihe ndị ọzọ dị ndụ
2 Dị osisi flora
3 Speciesdị osisi ndị na-agwụ agwụ
4 Speciesdị ndị ọzọ
Ihe kpatara mbelata ihe ndị ọzọ dị ndụ
Anyị maara na mbelata nke ụdị ihe dị iche iche dị na mbara ụwa bụ nsogbu anyị na-eche ihu na ọ ga na-akawanye njọ kwa ụbọchị. E nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche bụ ihe ndị na-eme ka ihe ndị dị ndụ dịgasị iche iche na-eme nke ọma. Uzo di iche iche dika onodu nke ebe obibi, onodu meteorological, ókèala, wdg. Otu n'ime mmetụta gburugburu ebe obibi nke ụmụ mmadụ na-emepụta na ọrụ ha na nke kachasị emetụta ụdị dị iche iche nke ndụ ọ bụ mbuso agha nke ebe obibi nke ahịhịa na ahịhịa.
Ebe obibi bụ ebe ụmụ anụmanụ na-etolite ndụ ha. Ọ bụrụ na ọrụ mmadụ emebi ma ọ bụ bibie ebe obibi dị otú ahụ, enwere ike imetụta ndị mmadụ n'ụzọ dị njọ. Ọnwụ nke ebe obibi ya pụtara na ụdị a enweghị ike imeghari ọnọdụ ma nwụọ. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ nwụrụ, mmeputakwa na-emebi ma nke nta nke nta ọ bụrụ ụdị dị iche. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ụdị osisi flora dị ugbu a ka ọ dị ugbu a n'ihi mmetụta mmadụ.
Dị osisi flora
A ghaghi iburu n'uche na enwere umu osisi ndi ozo kpochapuru site na ihe ndi ozo. Ma ọ bụ na e doghị ihe okike, kama ọ na-agbanwe mgbe niile. E nwere ụdị ndị nwere ike imeghari ka mma na mgbanwe gburugburu ebe obibi na ndị ọzọ ka njọ. Ndị na-adịghị eme mgbanwe nke ọma na-anwụ ma na-apụ n'anya. Enwere otutu ahihia ahihia:
Anwụchala nke ohia n'ime ohia: osisi a bụ otu na-ala n'iyi na ebe obibi ya. Nke ahụ bụ, ọ pụtaghị na ọ nweghị ụdị nke ụdị a n'ụwa, mana na ọ nweghị onye ọ bụla nọ n'okike. Ndi mmadu na echekwa otutu mmadu n'ime ebe obibi ma obu ebe nkpuru ahihia.
Ifuru osisi na ebe obibi ya: e nwere ụdị flora nke nwere ike bụrụ ọbụna cosmopolitan. Cosmopolitan bụ na mpaghara nkesa ya gbasara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa dum. Ya mere, n'ihi ihe okike na ihe mmadụ kpatara, osisi nwere ike ịpụ n'anya site na gburugburu ebe obibi, mana ọ bụghị n'ụwa niile.
Ifuru osisi: nke a bụ aha ụdị ahịhịa nke onye ikpeazụ nwụrụ kpamkpam na ihu ofwa. N'okwu a, ọ nweghị ụzọ isi weghachite ụdị ahụ ebe ọ bụ na ọ nweghị onye ọ bụla dị na gburugburu ma eke ma gburugburu.
Speciesdị osisi ndị na-agwụ agwụ
N'etiti osisi ndị larala n'iyi, anyị na-ahụ okooko osisi, osisi, ahịhịa na ụdị ahịhịa ndị ọzọ akpụpụtara gburugburu anyị ogologo oge gara aga. Maka ebumnuche dị iche iche, ha nwere ike itolite ọzọ na ala anyị. Okwesiri ighota na otutu umu anumanu nke anyi ga edeputa ma kọwaa na ha adighizi na mba ufodu. Ka anyị lee ndị bụ ụdị osisi ndị a kpochapụrụ:
Ajụjụ: Ọ bụ ụdị ahịhịa a na-akpọkarị osisi oliv Santa Santa Helena. Ọ bụ nwa afọ ohia sitere na agwaetiti mara mma nke dị na Atlantic Ocean. O so n’ọtụtụ mkpụrụ akụkụkụ lara n’iyi maka mbibi ebe obibi ha. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịnagide ọnọdụ ndị a, ha belatara ruo mgbe ha ga-apụ n'anya.
Paschalococos gbasara: aha ya na-akpọ Palma de Rapa Nui. Ọ bụ osisi nke Chile na mkpochapụ ya mere na 1650. N'oge a, egbutu osisi ndị a iji mee ụgbọ. N’iburu nnukwu ọchịchọ e nwere maka ụgbọ epeepe, ndị a mechara pụọ ​​n’anya.
Nkọwa nke mmekọrịta: ọ bụ shrub nke otu osisi floin a kpochapụrụ. Kpọmkwem, ọ bụ ụdị arboreal nke nwere ike iru ihe dị ka mita 3 n'ịdị elu yana ogwe ya tụọ ihe dịka 50 centimeters.
Astragalus onyinye: Speciesdị a bụ ụdị ahịhịa herbaceous nke sitere n'Africa, agbanyeghị na a na-ahụta ya ka ụdị osisi flora dị na Spain. Ọ bụ otu n'ime ụdị anyị nwere ike ịchọta na ájá ma ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Morocco na Tunisia.
Astragalus baionensis: ọ bụ osisi kpọmkwem site na Spain na France ma bụrụ nke a na-ahụkarị na mpaghara aja. O bu otu n’ime ahihia ahihia ohuru na obodo anyi ugbu a. Edebere ya dịka mbibi na Spain na 2018.
Araucaria mirabilis: ọ bụ ụdị dị na Patagonia. Ọ bụ osisi nke nwere ụdị conifers ma dịkwa ụba na mbara ụwa anyị. Ọ dịrịla n’elu ụwa anyị ihe dịka otu narị afọ na iri isii.
Speciesdị ndị ọzọ
Anyi ga na-aga n’iru ihe ndi eji kpochapu osisi ala osisi n’anyi jiri juo anya.
Franklinia: Achọtara ya na mpaghara Georgia na ọ bụ otu n'ime osisi ndị lara n'iyi na anụ ọhịa. Nke a pụtara na ọ na-adịgide ndụ naanị na gburugburu mmadụ n'ụzọ etolite. Gaghị enwe ike ịchọta ụdị ọ bụla nke ụdị a n'ụzọ nkịtị. Kemgbe 1803, ọ nwụọla kpamkpam n'ihi mbibi na-aga n'ihu nke ebe obibi ya.
Nkọwa nke Normania: Ọ bụ ụdị sitere na obodo anyị ma ama aha ya bụ Tomatillo de Tenerife. Ọ bụ ọkara-osisi ogologo ọkara shrub furu efu n'ihi mgbagwoju anya omumu bayoloji. Speciesdị a bụ ihe atụ doro anya nke ịhụ ụfọdụ ụdị ahịhịa na-ala n'iyi na-apụ n'anya n'ihi na ha enweghị ike imeghari na gburugburu ebe obibi.
Laelia gouldiana: Ihe eji mara ya bu ifuru ihe ngosi di ka orchid. Ọ bụ otu n'ime osisi ndị lara n'iyi na Mexico ma ama nke ọma maka inwe mkpịsị akwụkwọ na-acha odo odo na akwụkwọ nwere nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụ osisi dị na steeti Hidalgo.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụfọdụ ụdị ahịhịa ahịhịa mara mma na ihe kpatara ha ji efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Kpochapu osisi
Fumigate akwukwo nri ubi